TSENA ALAKAMISY MAHAMASINA: Niakatra 1000 Ariary ny ticket.
Lynda ANDRIATSITONTA 2 Comments août 26, 2016
Tsy nisy akory ny fampilazana mialoha amin’ny fampiakarana ny vidin’ny ticket ao amin’ny tsenan’i Mahamasina isaky ny Alakamisy. Hatramin’izay 500 ariary ny ticket kanefa niakatra 1000 Ariary izany. Tampoka tamin’ireo mpivarotra io fampiakarana ary betsaka tamin’izy ireo no mitaraina.
‹ ASA FANAOVAN-GAZETY: Natao ankisitrisitrika ny fihaonan’ireo mpanao gazety vitsivitsy.	› SIPA – Tapany faha 2
août 26, 2016	@ 18:18:56
Harena Mamiratra Fiharintsoa Samantha
août 27, 2016	@ 02:34:06
Harena Mamiratra Fiharintsoa Samantha liked this on Facebook.